အချစ်ရေး	မေးခွန်းအားလုံးကို မြင်တွေ့စေရန် ညာဖက်အစွန်ရှိ (Calculate ဘေးမှ တြိဂံ)ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။ မေးခွန်းများ Drop Down ကျလာမည်။
ဒီနှစ်ထဲမှာ အချစ်ရေးကိစ္စ အဆင်ပြေပါ့မလား။
သူ့ကို ချစ်နေတာ ဖွင့်ပြောလိုက်ရမလား။
သူ ကိုယ့်အချစ်ကို တုန့်ပြန်ပါ့မလား။
သူ့အချစ်ကို လက်ခံပါတယ်လို့ အဖြေပေးလိုက်ရင် ကောင်းမလား။
ကိုယ့်ချစ်သူ (ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူ)နဲ့ လက်ထပ်ရမလား။
သူ ကိုယ့်အပေါ်မှာ သစ္စာရှိရဲ့လား။
သူ ကိုယ့်အရင် ရည်းစားဘယ်နှစ်ယောက် ထားဘူးသလဲ။
ကိုယ့်မှာ အချစ်ဦးနဲ့ ညားဖို့ကံပါသလား။
သူနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်။ ရှေ့ဆက်ဘာဖြစ်ဦးမလဲ။
အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာ ကံကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်မလား ၊ ကံဆိုးသူတစ်ဦးဖြစ်မလား။
<br /> 242 comments on “အချစ်ရေး”	ကျော်ဇင်ဦး on August 22, 2010 at 5:17 pm said:
chitthu on August 22, 2010 at 6:47 pm said:
sweety on August 22, 2010 at 9:02 pm said:
Ma Sandar Soe on August 23, 2010 at 10:12 am said:
yamone on August 23, 2010 at 3:24 pm said:
သိပ်ပြိးတော့မမှန်ဘူး ၊ သမီးမှာမှရည်းစားမရှိတာကို
thantzin on August 23, 2010 at 7:47 pm said:
thantzin on August 23, 2010 at 7:49 pm said:
thuthu on August 24, 2010 at 11:09 am said:
it is really true.i am very desired in Astro.
saisaoyan on August 24, 2010 at 2:50 pm said:
sakawarhlaing on August 24, 2010 at 4:23 pm said:
lwinmyoaung on August 25, 2010 at 5:50 pm said:
kyawbo on August 25, 2010 at 10:43 pm said:
yenaungsoe on August 25, 2010 at 11:57 pm said:
chotun on August 26, 2010 at 11:25 am said:
poe poe on August 26, 2010 at 3:02 pm said:
thorzin on August 26, 2010 at 5:28 pm said:
ဘာလို ဒီလောက်မှန်ရတာလဲ လိမ်ပေးလို့မရဘူးလား ခငိဗျားအဖြေ ရင်ကိုတဲ့တဲ့ ထိတယ်ဗျား ကျေးဇူးပါဘဲ
nann myat thiri khing on August 26, 2010 at 5:37 pm said:
Dr.Tin Bo Bo on August 26, 2010 at 5:45 pm said:
အမှန်က ဆရာဟောတာ မဟုတ်ပါ။ ဆရာက အမေး နဲ့ အဖြေကို စီစဉ်ရုံ စီစဉ်ပေးထားတာပါ။ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ့်ဟာကို ဟောခြင်း သာဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်မလား မသိဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မေးသူလည်းဖြစ် / ဟောသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
saisai on August 26, 2010 at 7:40 pm said:
လက်ရှိ ကိုယ်ချစ်နေတဲ့ သူနဲ့ဆုံစည်းခွင့်ရှိမရှိ သူမနဲ့အတူနေခွင့်ရှိမရှိ
kyawkyaw on August 28, 2010 at 10:43 am said:
Can i meet the girl that i want .I want to live with her until i die.Please predict.
sagarcho on August 28, 2010 at 12:58 pm said:
Thank you very much ! I lke this website very much. I read everyday.
I wish you haveapaece of mind, sayar.
linn latt on August 28, 2010 at 2:00 pm said:
linn latt on August 28, 2010 at 2:03 pm said:
thitsar on August 28, 2010 at 2:19 pm said:
အချစ်ရေး မှာ တဖက်သတ် ချစ်ရတဲ့သူအတွက် သူ့ရဲ့ အချစ်ကိုရမှရပါ့မလား ဆိုတာ တင်ပေးပါလား ????? !!!!!!!
su su on August 28, 2010 at 3:01 pm said:
yeeyeewin on August 30, 2010 at 3:25 pm said:
winlaiei on August 30, 2010 at 6:51 pm said:
ko ko thet on August 30, 2010 at 9:11 pm said:
ကျွန်တော် wednesday နေ့ ၄.၂.၁၉၈၇ မှာမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ အချစ်ရေးလေး တစ်ဆိတ်လောက် ဟောပြောပေးပါ။
Dr.Tin Bo Bo on August 30, 2010 at 9:50 pm said:
ko ko thet သို့
ဒီနေရာမှာ တင်ထားတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။ ဟောရမှာ ပျင်းလို့ ready made လုပ်ပေးထားတာပါ။ ဒါနဲ့ အားမရရင်တော့ အမေး/အဖြေ ကဏ္ဍထဲမှာ ၀င်မေးပါ။ ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းများ ဖြေမပေးပါ။
laminphyu.94 on August 31, 2010 at 1:11 pm said:
Thuzar on September 1, 2010 at 1:48 pm said:
ဆရာ့ရဲ့ဟောချက်တွေတော်တော်များများက ကျမနဲ့အမြဲတိုက်ဆိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ အကောင်းရော အဆိုးရောပေါ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။
she on September 1, 2010 at 6:58 pm said:
ss on September 2, 2010 at 3:52 am said:
မှန်လွန်းလုို့ ဘယ်လုိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး
Waddy on September 3, 2010 at 11:09 am said:
အရမ်းမှန်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ တန်ဖိုးမထားတတ်တာမျိုး ရှိခဲ့ရင် အတုန့်အလှည့်ပြန်ခံရမှာဘဲ။ ဒီလိုမှ မရှိခဲ့ရင် ကံဆိုးမှုဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။
arkar on September 3, 2010 at 12:34 pm said:
ကောင်းမြတ် on September 3, 2010 at 9:34 pm said:
ကောင်းမြတ် on September 3, 2010 at 9:37 pm said:
newun on September 4, 2010 at 10:17 pm said:
ကျွန်တော်ပထမ အဖြေ..ကိုရတော့ …
newun on September 4, 2010 at 10:24 pm said:
susu on September 5, 2010 at 3:32 pm said:
အလင်း(လင်းချစ်သူ) on September 6, 2010 at 12:34 pm said:
ဗေဒင်ကိုမယုံ ပင်မယ့် အခုယုံချင်လို့ ပါ
marnayoung on September 8, 2010 at 10:19 am said:
mamarlarwin2009 on September 9, 2010 at 8:27 am said:
အချစ်ေ၇းကိစတွေမှာကံကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်မလား ၊ ကံဆိုးသူတစ်ဦးဖြစ်မလား
einmaw on September 9, 2010 at 9:30 am said:
moee on September 10, 2010 at 2:04 pm said:
ရည်းစားတွေ ဘယ်လောက်များများ ကိုယ့်ကို အချစ်ဆုံးဆိုတော့
အောင်သူရဟိန်း on September 11, 2010 at 12:51 pm said:
chochosaing on September 12, 2010 at 11:53 am said:
chochosaing on September 12, 2010 at 11:55 am said:
chochosaing on September 12, 2010 at 12:19 pm said:
thidaoo on September 12, 2010 at 8:19 pm said:
ဆရာသမီးကစနေသမီးပါ မွေးနေ့က၁၂.၃.၁၉၈၃ ပါ ချစ်သူကအင်္ဂါသား၁၉.၁၀.၈၂ပါ သမီးတို့ဖူးစာဘက်ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ သမီးရဲ့အချစ်ရေးကိုသိလိုပါတယ် ၈ဏန်းက ၂၁ ပါ
ဲဂျန်ဖြိုး on September 13, 2010 at 9:14 pm said:
ဲဂျန်ဖြိုး on September 13, 2010 at 9:18 pm said:
1ခုမေးချင်သေးတယ်အခုကောင်မလေးနဲ့အနေဝေးနေတယ် ကောင်မလေးနဲ့ဖုန်းထဲမှာပဲချစ်သူဖြစ်တယ် အဲဒီကောင်မလေးနဲ့ရမလား ကျွန်တော်ကအငယ်သူကအိမ်အကြီးဆုံး စဦးစနှောင်းမယူကောင်းဘူးဆို
Dr.Tin Bo Bo on September 13, 2010 at 9:19 pm said:
ဟုတ်ပြီ။ မေးခွန်း ဘယ်နှစ်ခု မေးလဲ။ (၃)ခုထက် ကျော်ရင် နောက်ဟာတွေ မှန်ကန်မှုအားနည်းသွားမယ်လို့ သေသေချာချာ ရေးထားပါတယ်။ ပထမဆုံး မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို သတိထားပါ။ မှတ်ထားပါ။ အခုမှားနေရင်တောင်မှ နောင်ကို မှန်လာတတ်တယ်။
sandy on September 14, 2010 at 5:53 pm said:
သေချာလားတကယ် ၀မ်းသာလိုက် တာ ဆရာရယ် သူများတွေမဟုတ်ဘဲ သမီးရဲ့အချစ်ရေးဗေဒင် မှားပါစေဟူး တော်သေးတယ်
ဆရာ၇ယ် လန့် အောင်နလုပ်ပါနဲ့ 
Lloyd Liu on September 15, 2010 at 3:51 pm said:
ကျတော့ အချစ်ရေးတွေက မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်…….
san on September 16, 2010 at 5:09 pm said:
လက်ရှိ- ကိုယ့်ချစ်သူ နဲ့ ဒီ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ဖြစ်မှာလား၊
myuhnin on September 17, 2010 at 7:53 pm said:
zAny on September 19, 2010 at 5:17 pm said:
suzinphyowai on September 19, 2010 at 6:03 pm said:
i alway remember . you plan is very good
suzinphyowai on September 19, 2010 at 6:05 pm said:
i very love is lucky no you help me
lamin on September 20, 2010 at 8:21 am said:
ngwe thandar on September 20, 2010 at 11:46 am said:
ွှThandar on September 20, 2010 at 3:24 pm said:
Thanks alot, Saya.
Theingi htoon on September 20, 2010 at 8:35 pm said:
so sad, i want to marry my boyfri . i love him so much . i need him . but this site said we can ………………….. !_!
laminphyu.94 on September 21, 2010 at 2:37 pm said:
kyawsoethan on September 21, 2010 at 6:58 pm said:
will i be lucky in marriage
eiphyu on September 22, 2010 at 11:11 am said:
ကျော်မျိုးထွန်း on September 22, 2010 at 4:54 pm said:
ကျော်မျိုးထွန်း on September 22, 2010 at 5:13 pm said:
minminzaw on September 22, 2010 at 10:33 pm said:
မျှော်မှန်းထားသလို ဖြစ်မလား ဒိနှစ်တော့လေ
minminzaw on September 22, 2010 at 10:36 pm said:
minminzaw on September 22, 2010 at 10:37 pm said:
ွှThit Oo Kyaw on September 25, 2010 at 11:17 am said:
khin on September 25, 2010 at 6:19 pm said:
khin on September 25, 2010 at 6:25 pm said:
khin on September 25, 2010 at 6:30 pm said:
khin on September 25, 2010 at 6:38 pm said:
Dr.Tin Bo Bo on September 25, 2010 at 6:44 pm said:
ဟဲ့ – အကုန်လျှောက်မေးရင်တော့ ဘယ် မှန်တော့မလဲ။ ဒါကြောင့် မေးခွန်း (၃)ခုဘဲ မေးပါလို့ ပြောထားတာပေါ့။
kyawmyotun on September 25, 2010 at 9:29 pm said:
khammo on September 27, 2010 at 7:28 pm said:
ချစ်ဦးသူ့နဲ့ညားမလား ၊ မှန်ပါတယ် ကျေးဇူးပါ
lamin on September 28, 2010 at 8:32 am said:
ဆောင်းပြာသို on October 1, 2010 at 4:45 pm said:
ကြယ်ဖြူလေး on October 2, 2010 at 12:27 pm said:
ဟင့် ငိုတောင်ငိုချင်သွားတယ် မှန်လွန်းလို့ ပါ ဟင့်ချစ်သူရယ်
winterrose on October 2, 2010 at 2:19 pm said:
သမီးက အငယ်ဆုံး …သူက အကြီးဆုံး… အခုလောလောဆယ်သမီးတို့နှစ်ယောက်
စိတ်ဆိုးနေကြတယ်… သမီးရဲ့ ဇာတာက အပျိုးကြီးဇာတာပါလား သိပါရစေ …….
may lay on October 4, 2010 at 9:35 pm said:
aunghtayoo on October 5, 2010 at 12:03 pm said:
ီsandi on October 5, 2010 at 1:42 pm said:
kyawtkyawthlaig on October 6, 2010 at 3:00 pm said:
ကျော့2ကတနင်္လာသမီးပါ မွေးတဲ့နေ့က 28.40.1990
ed on October 9, 2010 at 8:18 am said:
အချစ်ရေးကြတော့ ၀င်ထားကြတာ ကြောက်စရာကြီးပါလာ….
နွေး on October 19, 2010 at 11:28 am said:
yee yee win on October 19, 2010 at 7:01 pm said:
မ – က 29.10.69 ပါ လိုတာနဲ့ နီးစပ်တာက အလွဲတွေဖြစ်နေတော့ အပျိုကြီး ဇာတာလား၊ ဖြေပေးပါနော်။
နွေး on October 31, 2010 at 6:42 pm said:
Dr.Tin Bo Bo on November 1, 2010 at 9:52 am said:
ဆရာ့အနေနဲ့ ဗေဒင်သာတွက်တတ်ပြီး၊ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ အချစ်ရေးကိစ္စများကို အကြံမပေးတတ်ပါ။ လူငယ်အချင်းချင်း ထံမှာဘဲ အကြံတောင်းကြည့်ပါ။
poe thin zar kyaw on November 3, 2010 at 12:12 pm said:
မ (5.9.86) သောကြာသမီး
က (9.8.88) အဂါင်္သား
သမီးတို့နှစ်ယောက်ဖူးစာဆုံ မလားသိချင်ပါတယ်ဆရာ၊ သူသမီးအပေါ် တကယ်အချစ်စစ်နဲ့ချစ်လားဆိုတာ သိချင်ပါတယ် ၊ဖြေပေးပါနော်။
zin ko ko aung on November 3, 2010 at 12:19 pm said:
ကျွန်တော်ကောင်မလေးကကျွန်တော့်အပေါ် တကယ်ချစ်မချစ၊်ကျွန်တော့်အပေါ်သစ္စာရှိလား၊ လက်ထက်ခွင့်ရနိုင်မလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဆရာ၊ဖြေကြားပေးပါနော်။
Aye Myint Zu on November 3, 2010 at 12:31 pm said:
သမီးရဲ့ ချစ်သူနဲ့ ပေါင်းဖက်နိုင်မလားသိချင်ပါတယ်။ သူက သမီးအပေါ်တကယ်ချစ်တာလား၊အပျော်သဘောနဲ့လား၊သူ့ကို ယုံကြည်ရပါ့မလား၊ နောက်ပြီး သူက အကြီးဆုံး သမီးက အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆရာ၊နော်ပြီးမိဘတွေသဘောမတူမှာစိုးရိမ်လို့ပါဆရာ ၊ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါဆရာ။
dede on November 5, 2010 at 7:42 pm said:
phyuthizar on November 5, 2010 at 8:37 pm said:
ဖြိုးဇာလီအောင် on November 13, 2010 at 6:37 pm said:
Htet on November 15, 2010 at 11:21 am said:
စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ယတြာလေးများမရှိဘူးလား။ ဘယ်လိုမှ မဝေးချင်လို့ပါ။
Jue on November 17, 2010 at 3:38 pm said:
ဆရာ.. သူများတွေမှန်မမှန်တော့မသိဘူး… သမီးတော့မှားနေသလိုဘဲ … သမီးရဲ့ရည်စားနဲ့ ပျက်ထားတာမကြာသေးဘူး.. ရည်းစားနဲ့ ဆုံစည်းခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ … ??????? ပြီးတော့သမီးရဲ့ရည်းစားကလည်း နောက်တစ်ယောက်တောင်ရနေပြီ၊၊
Jue San on November 17, 2010 at 3:47 pm said:
ဆရာ… သူများတွေမှန်မမှန်တော့မသိဘူး… ဂျူး ကိုဟောတာတော့ မှားနေတယ်ဆရာ… လုံးဝ ကို အရှေ့ နဲ့ အနောက် ဆန့် ကျင်ဘက်ပါဘဲ.. ဒါပေမဲံ့ ဆရာဟောတဲ့ အတိုင်းဖြစ်ရင်တော့ စိတ်ချမ်းသာတာပေ့ါ…. ဒါပေမဲ့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ..
minkyawth2 on November 19, 2010 at 4:27 pm said:
minkyawth2 on November 19, 2010 at 4:31 pm said:
myat noe thu lay on November 20, 2010 at 1:14 pm said:
ဆရာ မြတ်နိုး ကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ရင်မြန်မြန်လေးဖြေပေးပါနော် မြတ်နိုး အမေးအဖြ(၅)ထဲမှာမေးထားပါတယ်
phyuthizar on November 22, 2010 at 7:48 pm said:
eilay on November 24, 2010 at 8:16 am said:
ချစ် on November 25, 2010 at 2:49 pm said:
ကျော်လင်းထွန်း on December 1, 2010 at 5:07 pm said:
ဆရာ ကျွန်တော် ဘ၀အတွက် သေရေးရှင်ရေး ဖြစ်နေလို့ တစ်ခွန်းထဲသော မေးခွန်းမေးပါရစေ ….ကျွန်တော်က ၂၉.၈.၁၉၇၇ တနင်္လာသား ဖြစ်ပြီး ချစ်သူက ..၁.၈.၁၉၈၅ သောကြာ သမီးပါ ….၂၀၁၁ .၁၀ လပိုင်းလောက်မှာ လက်ထပ်ဘို့လုပ်ထားပီးပါပီ နောက်ဆုံးသူ့ မြို့ မှာ အိမ်နဲြ့ခံတောင်ဝယ်ပီးပါပြီ …ကျေးဇူးပြု ပီး ဒီစာမျက်နှာကနေ မဖြေပဲ တိုက်ရိုက်ဖြေလို့ ရယင်ဖြေ ပေးပါဆရာ…ကျေးဇူးမမေ့ ပါဘူး အော် ကျွန်တော့် နာမည် ကျော်လင်းထွန်းဖြစ်ပီး ချစ်သူနာမည်ကတော့သင်းသီရိ ပါ …
ကျော်လင်းထွန်း ( ဆွီဒင်နိုင်ငံ) on December 1, 2010 at 5:51 pm said:
ဆရာရေ သေရေး ရှင်ရေးဆိုတာ ဗေဒင်ဆရာတော်တော်များများ က ကျွန်တော်တို့ မညားနိုင်ဘူး လို့ ဟောနေကြလို့ ပါ …ကျွန်တော်သိချင်တာလဲ အဲ့ဒီမေးခွန်းပါပဲ …တစ်ကယ်ပဲ မညားနိုင်ဘူးလား ဆိုတာ ဆရာ ရဲ့ ပညာနဲ့ ကြည့် ပေးပါ ဆရာ … ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်ပါ
linn lei thar yar on December 7, 2010 at 12:46 am said:
i really love sai tun hlaing oo but he is not love me and he has girl friend!he say he cant love me ,never!that was in 2009!but i m waiting !i want apologize to him what i was wrong!but now i m very far from him!i asked my friends but they say “u r mad”.whatever i believe that he will love me return if i was waiting!it can b?please help me i begging u!
phyuphyu on December 24, 2010 at 11:52 pm said:
သမီးမေးချင်တာက အခုလက်ရှိချစ်သူ နဲ့ နီးနိုင်ပါ့မလား။
neocortex on January 10, 2011 at 4:11 pm said:
ရုတ်တရက်ခင်ဗျားရဲ့ အချစ်ရေးကိစ္စတွေ အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်။ သိပ်ဝမ်းမသာနဲ့ဦး ။ ပြီးတော့ ရုတ်တရက် ပြန်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒီကိစ္စတွေ နောက် (၄)လလောက် အတွင်းမှာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
yin on January 12, 2011 at 10:27 pm said:
အဖြေကို အရမ်းသဘောကျမိပါတယ်ရှင် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်
အမေးအဖြေကဏ္ဍမှာ ဟူးရားဂဏန်းရပြိး comment နေရာရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်၇ှင်
ဇာဇာထွန်း on January 23, 2011 at 12:59 am said:
ဆရာ အခု ကျွန်မချစ်သူနဲ့ ပြသနာဖြစ်ပြီး စိတ်သဘောကွဲလွဲနေပါတယ်။ ချစ်သူက ကျွန်မဆီက နားလည်ပေးတဲ့အချစ်မျိုးပဲလိုချင်တာတဲ့။ ကျွန်မ သူ့ကို နားလည်ပေးထားပါတယ်။ အရမ်းလဲ ချစ်လို့. အခု သူက ကျွန်မကို လမ်းခွဲရအောင်လို့ပြောနေတယ်။ ကျွန်မတို့ ချစ်သူနှစ်ယောက် တကယ်ပဲ ဝေးကြရတော့မှာလား။ ဆရာ့ ပညာနဲ့ ကျွန်မတို့ကို ကူညီပါအုံးဆရာ။
queen on January 23, 2011 at 2:59 pm said:
tuntun on January 26, 2011 at 12:30 pm said:
tuntun on January 26, 2011 at 12:33 pm said:
အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်ကဆရာ့ဗေဒင်ထဲကအတိုင်းပဲအချစ်ရေးကံမကောင်းသူတစ်ယောက်လားကျွန်တော်သိ ချင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကအချစ်ရေးမှာညံ့တာလာိးဆိုတာကိုတော့ပြောပြပေးပါလား မွေးနေ့က 1ရက်နေ့ မွေးလက 8လ ပိုင်း သက္ကရာဇ်က 1992 ပါဆရာတွက်ပေးပါနော်
queen on January 29, 2011 at 12:22 pm said:
myintzuthaka on January 29, 2011 at 12:36 pm said:
ကျေးဇုးအရမ်းတင်ပါတယ် ဆရာဆိုဒ်က အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
thiri on January 29, 2011 at 7:29 pm said:
ဟူးရားဂဏာန်းနဲ့ပါ။ ဘယ်မှာ မေးရမယ်မှန်းမသိလို့ ဒီcomment မှာ ရေးရတာပါ။
ကျွန်မမွေးသရာဇ်က 2021992 ပါ။ကြာသပတေး သမီးပါ။ကျွန်မချစ်သူ မွေးနေ့က 1251989 သောကြာသားပါ။ သူနဲ့ ဆုံစည်းခွင့်ရပါ့မလား။
Naing on February 9, 2011 at 2:37 pm said:
myat zun phyu on February 12, 2011 at 4:20 pm said:
ရည်မွန် on February 16, 2011 at 5:22 pm said:
nang soe thandar on March 7, 2011 at 7:03 pm said:
sandacu on March 8, 2011 at 2:41 pm said:
မေးတဲ့လူရဲ့ မွေးနေ့၊ မွေးရက်၊ မွေးလ တွေမပါပဲနဲ့ မှန်နိုင်ပါ့မလား….
ကံစမ်းမဲ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ် ဗေဒင်တွက်တာနဲ့ မတူပဲ….
zawlinhtet on April 8, 2011 at 3:25 pm said:
12.4.1977 ထက်ထက်နဲ့ 25.1.1984 ဆူဝေးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်လားဆရာ…
zawlinhtet on April 8, 2011 at 3:57 pm said:
ဟူရားဂဏန်းက 75 ပါဆရာ…
ံhaymaan on April 27, 2011 at 3:04 pm said:
yez on June 20, 2011 at 12:40 pm said:
May Khant Yin on June 20, 2011 at 4:55 pm said:
kyaw htike on July 6, 2011 at 5:55 pm said:
nwe ni on July 18, 2011 at 11:21 am said:
သမီးက 16.7.1994 မှာမွေးတာပါ သူက 22.10.1992 ပါသမီးတို့နှစ်ယောက်ဖူးစာစုံနိုင်မလားသိချင်ပါတယ်…ဖြေပေးပါနော်
swe zin on July 20, 2011 at 7:25 pm said:
သမီးက10.2.1987 ပါ။ သူက 24.12.1983 ပါ။ သမီးတို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်။ကူညီပေးပါနော်
Dr.Tin Bo Bo on July 21, 2011 at 11:21 pm said:
အဆင်မပြေတာ ပြေအောင် (ယတြာ) သဘောမျိုး လုပ်ဖို့ ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့ ဒီဆိုဒ်မှာ နေရာမရှိပါ။ အကြောင်းအကျိုး / အကောင်းအဆိုးကို သာ ကြည့်တတ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေအောင် လုပ်မပေးတတ်ပါ။ အခြား ဆရာများနဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
Dr.Tin Bo Bo on July 21, 2011 at 11:24 pm said:
တစ်ရက်ပျော်ချင် ၊ အရက်သောက်
တစ်နှစ်ပျော်ချင် ၊ အိမ်ထောင်ပြု
တစ်သက်ပျော်ချင် ၊ သစ်ပင်စိုက် တဲ့ ။ တရုတ် စကားပုံလေး။ အချစ်မှာ ပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုတာ အလွန်ဆုံး တစ်နှစ်ပေါ့ ။ နောက်ကျ စိတ်ညစ်ရတော့တာပါဘဲ။ ဘယ်ဗေဒင်ဆရာဆီမှ မေးဖို့ မလိုပါဘူး။ အိမ်ထောင်ပြုတယ် ဆိုတာ ကိုယ့် ဒုက္ခကိုယ်ရှာကြတာဘဲ။ အခုပြောတာတော့ နားလည် ဦးမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောင် (၁၀)နှစ် ၊ အနှစ် (၂၀)ကျရင် ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။
အညှော် on July 24, 2011 at 10:43 am said:
ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ အရင်းမဟုတ်ပါဘူး တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့နော်
ရတနာ on July 24, 2011 at 12:12 pm said:
Thank you so much. I’m so happy coz of i get the right answer
Dr.Tin Bo Bo on July 24, 2011 at 4:39 pm said:
လျှို့ဝှက်အချစ်ရေး ဆိုတာ “လူသိမခံနိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး” မျိုးပေါ့ ။ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တာ မျိုး၊ လိင်ကိစ္စ ရှုတ်ထွေးတာမျိုး ၊ စမော ဆွဲတာမျိုး ၊ ကစ်ပင်း ထားတာမျိုးတွေပေါ့။
myozawhein on July 25, 2011 at 11:19 pm said:
naymyoe169 on August 3, 2011 at 3:57 pm said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာဗေဒင်လေးတွေတင်ပေးထားလို့ ဆ၇ာ၇ဲ့ဆိုက်လေးကို အခုမှတွေ့တာ ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတွေရှိ၇င်လည်း မေးခွင့်ပြုပါ။
ဂူဂူး on August 17, 2011 at 7:59 pm said:
မေးခွန်း၁ ခုကို မကျေနပ်လို့ ၂ခါမေးတာ (၂ ရက်အတွင်း)
ဒါပဲ ပြန်ကျတယ် သမီး မယုံလို့ မရတော့ဘူး
သူကို ယုံကြည်လို့ မရဘူးတဲ့
honey cho on August 21, 2011 at 6:07 pm said:
yi on August 24, 2011 at 7:24 pm said:
My birthday is 7.3.1979. My job isatuition teacher. My lover’s birthday is 27.5.1974.So I want to know our marry time.Is my job ok?
yi on August 24, 2011 at 7:30 pm said:
And then i want to know his mind.My lucky number is 7.Will be lucky in this job? Please reply me.
myinthan on August 25, 2011 at 10:48 pm said:
အရမ်းမှန်တယ်ဆရာ အချစ်ကံကေါင်းသူတယောက်ဖြစ်အောင်နည်းလမ်းပေးပါအုံးဆရာ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ26.04.1973
myinthan on August 25, 2011 at 10:50 pm said:
sai aung kham on August 27, 2011 at 3:40 pm said:
I do’nt say.
eiei on August 29, 2011 at 8:15 pm said:
သဲအိသင်ဇာငယ် on September 1, 2011 at 11:57 am said:
သဲအိသင်ဇာငယ် on September 1, 2011 at 12:01 pm said:
သမီးအခုလက်ရှိတွဲနေတဲ့ ချစ်သူ က အိမ်ထောင်ဘက်ဖြစ်ပါ့မလား။
သမီး ဒီနှစ်မှာ အိမ်ထောင်ကျကိန်းရှိလားဟင်……….။
nanmokham on September 1, 2011 at 1:56 pm said:
su su on September 3, 2011 at 11:40 am said:
ဟုတ်နေတယ် အခါတိုင်းအစဉ်ပြေပြီးဒီနှစ်ထဲမှာ အစဉ်မပြေဘူး
haymar on September 6, 2011 at 9:44 pm said:
haymar on September 6, 2011 at 9:47 pm said:
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ခမ်းခမ်းနားနား လက်ထပ်ရမယ်တဲ့ ပျော်လိုက်တာ
moethiha on September 11, 2011 at 11:52 pm said:
nal nal lwal nay tal naw !
သုစံ on September 13, 2011 at 6:48 pm said:
ကဲ။ ဟူးရားဗေဒင်နဲ့ အတတ်ဟောလိုက်မယ်။ (၆)လအတွင်း ခင်ဗျားအချစ်ရေးတွေ အဆင်ပြေတော့မယ်။ ချစ်သူချင်းကွဲနေရင် ပြန်ပြေလည်သွားမယ်။ ချစ်သူမရှိသေးရင် ”ရည်းစား” တစ်ယောက်ရတော့မယ်။ မှန်ရင် ကျေးဇူးတင်ဖို့ မမေ့နဲ့။
ဆုဇာရည်တွေး on September 15, 2011 at 6:02 pm said:
yelinthu on September 18, 2011 at 6:01 pm said:
Su Pyai Mon on September 19, 2011 at 10:37 am said:
12.6.1990 ဒါက သမီး ရဲ့မွေးနေ့ပါ၊ 23.8.1984 ဒါကတော့ ချစ်သူ ကိုမသရအ ရဲ့ မွေးနေ့ပါ..။ သမီးတို့ လက်ထပ်ဖို့ထိအဆင်ပြေနိုင်မလား သိချင်လို့ပါ..။ ပြီးတော့လေ သူက သမီး အပေါ် ကြင်နာမလား..။ သစ္စာရှိပါ့မလား သိချင်ပါတယ်…ဆရာကူညီပါနော်…….။
karyanseesar on September 22, 2011 at 12:00 pm said:
yuwar on September 23, 2011 at 11:42 am said:
julykoko on September 24, 2011 at 11:09 am said:
ကျွန်တော်က အချစ်ရေးမှာ ကံခေတာတော့မဟုတ်ဘူး
သူ က ကျွန်တော့်ကို မယုံဘူး
တင်တင်ဝင်း on September 28, 2011 at 3:26 pm said:
A K KYAING on October 3, 2011 at 3:32 pm said:
ကြယ် on October 13, 2011 at 2:11 pm said:
အိမ့်ရတနာသွယ် on October 20, 2011 at 3:36 pm said:
အိမ့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကောင်လေးကအိမ့်ကိုစိတ်ဝင်စားရဲ့ လားရှင့်
kyiphyusin on October 21, 2011 at 10:23 am said:
အိမ့်ရတနာသွယ် on October 21, 2011 at 4:34 pm said:
အိမ့်ချစ်တဲ့ သူနဲ့ ဘယ်တော့အမြန်ဆုံးနီးစပ်ရမလဲဆရာ
shweinnthulynn on October 28, 2011 at 8:31 pm said:
khinlaymaw on November 1, 2011 at 1:03 pm said:
Yan Aung on November 15, 2011 at 2:01 am said:
kyaw on November 20, 2011 at 9:41 am said:
kyaw on November 20, 2011 at 9:48 am said:
kyaw on November 20, 2011 at 9:57 am said:
လမင်းလေး on November 27, 2011 at 2:48 am said:
မေဝေယံ on December 5, 2011 at 4:12 pm said:
ဆရာ… ယောက်ျားလေးက လူနက္ခတ်ဖြစ်ပြီး..မိန်းကလေးက ဘီးလူးနက္ခတ်ဖြစ်နေရင် အိမ်ထောင်ပြုလို့ရမရ…သိချင်ပါတယ်.. သမီးကောင်လေးက ၆-၄-၁၉၈၈ ပါ…သမီးရဲ့မွေးနေ့ကတော့ ၁၆-၂-၁၉၈၉ ပါ..ဖူးစာဖက်ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ပါတယ်..ဆရာ..
မင်းခန့်အောင် on December 9, 2011 at 12:34 am said:
Dr.Tin Bo Bo on December 9, 2011 at 11:32 pm said:
တကယ့်အချစ်ဦးမဟုတ်ဘဲ “ရီးစားဦး” ဖြစ်လို့နေမှာပါ။
အောင်လေး on December 12, 2011 at 10:02 am said:
ဆရာဟောထားတာတွေအရမ်းမှန်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကြုံနေရတာနဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲ။ ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။သူ့ကိုအရမ်းချစ်တယ်။အခွဲနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီသတင်းမမှန်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းရတော့မှာပေါ့…………..
ohnmar on December 15, 2011 at 10:47 am said:
sainaung on December 15, 2011 at 11:45 pm said:
အချစ်ဆိုတာဘာလဲဆရာ လူတွေပြောနေကျတဲ့အချစ်ဆိုတာတကယ်ရှီလား ကျွှန်တော်ရည်စား
တွေအများကြီးထားဘူးတယ် အချစ်ဆိုတာဘာလဲတော့မသိဘူးကျွှန်တော်ခုတသက်အချစ်နဲ့တွေ့ နိုင်
snow on December 16, 2011 at 2:01 pm said:
ပန် on December 21, 2011 at 6:40 pm said:
hanlay on December 24, 2011 at 2:56 pm said:
ဒီနှစ်ထဲမှာ ခင်ဗျား စန်းသိပ်ပွင့်နေတယ်။ အဲဒါသိပ်မကောင်းဘူး။ စန်းတွေ သိပ်များလာတော့ ရှုတ်ကုန် တတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်က ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေက ခင်ဗျားစကားကို ယုံကြည်နေမှတော့ အဆင်မပြေ စရာရယ်လို့ သိပ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ တဲ့(မှန်လိုက်တာဆရာရယ်)
april on December 30, 2011 at 12:44 pm said:
ံထက်ထက်စိုး on January 5, 2012 at 2:24 pm said:
thaw zin moe on January 30, 2012 at 7:08 am said:
eaindray on January 31, 2012 at 4:14 pm said:
su htet on February 4, 2012 at 10:37 am said:
ှဆုခိုင်ကျော်ဇံ on February 5, 2012 at 10:40 pm said:
ကျွန်မချစ်နေတဲ့သူရှိပါတယ် သူ့နာမည်က ကျော်ပြည့်ဖြိုးမောင်ပါ သူ့ အသက်က ၂၁ နှစ်ပါ နိုဝင်ဘာလ ၅ရက် ၁၉၉၀ မှာမွေးတာပါ။ ကျွန်မအသက်က ၁၇ပါ မတ်လ ၃၀ ၁၉၉၄ မှာမွေးတာပါ။ ကျွန်မနဲ့ သူနဲ့ကအခုချစ်သူတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေတတ်နေတယ်။ ပြီးတော့သူကျွန်မကိုတကယ်ချစ်မချစ်မသိဘူး ။ ကျွန်မသူနဲ့ပေါင်းဖက်ချင်တယ် သူ့ကိုတကယ်ချစ်မိနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါလား ဆရာ
မယု on February 8, 2012 at 9:18 am said:
သမီးက 12.11.1983 မှာမွေးပါတယ်။ စနေသမီးပါ
သူက 15.4. 1987 မှာ မွေးပါတယ် ။ ဗုဒ္ဒဟူးသားပါ။
ဒါပေမဲ့ သူမိဘတွေကသဘောမတူဘူးဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေရပါတယ်။
သူနဲ့ သမီး အဆင်ပြေပြေနဲ့ပေါင်းဖက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
သွယ်သွယ်အေး on February 8, 2012 at 6:58 pm said:
phyusinkyal on February 18, 2012 at 11:41 am said:
swe zin oo on February 24, 2012 at 12:57 pm said:
polar on February 26, 2012 at 5:01 am said:
polar on February 26, 2012 at 5:05 am said:
ဟိုက် ဒုက္ခပဲ 28/3/1993တဲ့ မွေးနေ့လာတူနေတယ်
စိုင်းကျော်မင်းဟန် on February 26, 2012 at 12:50 pm said:
ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော် အချစ်ရေးကံကောင်းပါ့မလားဆုံးဖြတ်ပေးပါနော် ကျွှန်တော်က1.24.1992 မှာမွေးတာပါ တနလာင်္သားပါဆရာ အချစ်ရေးကံကောင်းချင်ပါတယ် ခက်တာက ရည်းစားတယောက်မှ မရှိသေးတာ ဆရာ တွက်ပေးပါနော်
ုkyawnyeinoo on February 27, 2012 at 10:52 pm said:
မွေးနေ.2341989
ဖြိုးဝင်းထွန်း on February 28, 2012 at 3:52 pm said:
ကျွန်တော့မွေးနေ့က 3-3-1984 ကြာသပတေးပါဆရာ
ုkyawnyeinoo on March 1, 2012 at 10:29 pm said:
Yar ZAR on March 6, 2012 at 1:54 pm said:
khinehtetwai on March 9, 2012 at 11:16 pm said:
အောင်မင်းသူ on March 26, 2012 at 9:06 pm said:
APH on March 31, 2012 at 12:45 pm said:
nang mwe hom on May 3, 2012 at 3:33 pm said:
ခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ ကံမကောင်းမှုတွေနဲ့ အလုပ်နားရမှာလား။
မွေးနေ့က (5.12.1987) (စနေ)
နှင်းနှင်း on May 19, 2012 at 12:23 pm said:
arkar on May 22, 2012 at 11:32 pm said:
ကိုယ် ချစ်တဲ့သူကိုယ့်ကိုပြန်ချစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မွေးနေ့(၂၈.၅.၁၉၉၀)
ဝေယံစိုး on May 23, 2012 at 11:22 pm said:
Tar Tar on May 25, 2012 at 5:32 pm said:
Thank u! So much.
Kay Zin on May 27, 2012 at 4:47 pm said:
မေးခွန်းတွေကို email နဲ့ပို့ပြီးမေးလို့ရပါသလား။ ဘယ် email address ကိုပို့ရပါမလဲ။ ဘယ်လိုအသင်းဝင်ရပါမလဲ။
thet swe oo on May 29, 2012 at 12:45 pm said:
Pantra on December 20, 2012 at 5:29 pm said:
ဒီလေး on December 21, 2012 at 2:48 pm said:
အချစ်ရေးကို အိမ်ထောင်ရေးလို မျိုး နောက်တစ်ခု တိုးချဲ့ ပေးဖို့ အစဉ်အစီရှိလားဟင် တခြား မေးခွန်းတွေနဲ့ ပေါ့ နော်
Dr.Tin Bo Bo on December 21, 2012 at 9:05 pm said:
အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ အချစ်ရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး တွေပါ ထပ်တိုးချဲ့ရမှာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ- သူ အခု ဘယ်သူ့အကြောင်း စဉ်းစားနေလဲ ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့။
၀င်းမြကြည် on December 25, 2012 at 10:50 am said:
ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား????
အသည်းကွဲ နေသူ on December 27, 2012 at 10:31 pm said:
waiyanmin on December 28, 2012 at 10:14 am said:
meenge on December 28, 2012 at 10:10 pm said:
Phoo Pwint Nyein on January 6, 2013 at 4:42 pm said:
နေသွေး on January 19, 2013 at 9:14 am said:
အေးမြမွန် on January 20, 2013 at 12:26 pm said:
sulain on January 27, 2013 at 9:35 am said:
Don’t worry..can i be your….bf
ကာရံမိုး.... on January 27, 2013 at 3:06 pm said:
ရည်းစားမရှိသေးတဲ့ သူတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေထည့်ပေးပါအုံး
ု့ကြယ်စင် on February 11, 2013 at 1:57 pm said:
ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ရမယ်ဆိုတော့အရမ်းပျော်မိပါတယ် ချစ်သူရဲ့တစ်ဦးတည်းသောချစ်သူဖြစ်ရတာကိုဝမ်းသာပါတယ် ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးချင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရော တစ်ကယ်လက်ထပ်ရမှာလား ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါလား
Tin Tin Lwin on February 23, 2013 at 11:04 am said:
hlwanthae on March 2, 2013 at 12:50 pm said:
Zay Ya Wadi on March 25, 2013 at 1:29 pm said:
thureintun on March 27, 2013 at 10:40 am said:
အေးပွင့်ဖြူ on March 30, 2013 at 8:07 pm said:
သမီးကို ချစ်နေတဲ့သူက ဘယ်အချိန်မှ သမီးကို ဖွင့်ပြောမှာလဲ
Mya Theingi Aye on April 1, 2013 at 3:58 pm said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ …. ဒါပေမယ့်အဖြေတွေကတစ်ခုမှမကောင်းလို.ငိုချင်လိုက်တာ ဆရာရယ်… မှန်တယ်လို.လဲခံစားရပါတယ်…..ကျေးဇူးပါဆရာ
မန္တလေးသား on April 1, 2013 at 9:17 pm said:
Thet Mon on April 4, 2013 at 11:14 am said:
ရည်လဲ့ဟန် on April 6, 2013 at 12:01 pm said:
ဟူးရာဂဏန်း ရှာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲ ဘေး က Box ထဲတွေ့လို့ပါ
Htet Myat Paing on April 9, 2013 at 6:40 pm said:
Mya Theingi on April 19, 2013 at 10:01 am said:
ဆရာ သမီးရဲ.အမည်က မြသိဂီင်္အေး မွေးသကရာဇ်က ( 21.11.1985 ) ကြာသပတေးသမီးပါ။ သမီးချစ်သူက ကျော်ဆန်းဝင်း ( 01.10.1979 ) တနင်္လာသားပါ ။ သမီးရဲ့ ဟူရားဂဏန်းက ( 91 ) ပါ။ သမီးသိချင်တာက သမီးသူ.ကို လက်တွဲဖော်အဖြစ် ရည်စူးထားပါတယ်။ သမီးတို.အိမ်ထောင်ရေးဘဝခရီး အဆင်ပြေမလားသိချင်ပါတယ် ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါဆရာ… ကျေးဇူတင်လျက်
Dr.Tin Bo Bo on April 19, 2013 at 7:16 pm said:
လောလောဆယ် အမေး/အဖြေကဏ္ဍကို ပြန်မဖွင့်သေးပါ။ ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
ဖြိုး on May 3, 2013 at 10:51 am said:
ကေသီ on May 9, 2013 at 7:41 pm said:
၀တ်ရည် on May 9, 2013 at 8:24 pm said:
ဆရာရေ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို များများလေး ပေးစေချင်ပါတယ်
အခု ကိုယ်က ချစ်သူ၇ည်းစား မ၇ှိတဲ့ သူဆိုတော့လေ
မေးခွန်းတွေက မေး လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်
စန္ဒီ on May 11, 2013 at 11:23 am said:
အရမ်းစိတ်ညစ်သွားတယ် ပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် :’(
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,584)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,967)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,670)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,339)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,408)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,558)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,579)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,947)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,290)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,268)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,092)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,048)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,826)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,787)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,301)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,128)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,833)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,487)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,154)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,827)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,681)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,550)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,549)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,258)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,239)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,899)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,684)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,476)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,022)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !